कोरोनाकालमा यार्चाकुम्भु संकलन | Himalayan Conservation & Research Institute
कोरोनाकालमा यार्चाकुम्भु संकलन
by HCRI | May 6, 2020 | Op-Eds
यार्चाकुम्भु हिमाली बासिन्दाको आयको मुख्य स्रोतका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा यार्चाकुम्भुको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ । मूल्यवृद्धिसँगै यसैमा निर्भर हुनेहरू पनि बढिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठको पहिलो हप्ताभित्र विभिन्न जिल्लाका संकलनकर्ता यार्चाकुम्भु पाइने पाटनहरूमा पुगिसक्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ । अन्यत्र स्थानीय गाउँपालिकाले संकलन पुर्जी दिन्छ ।
यार्चाकुम्भु संकलन गर्न जानेहरूले रासन, न्यानो कपडा, दाउरा लगायतका सामग्रीको जोहो गर्ने बेला यही हो । डोल्पा, मनाङ, रुकुम, दार्चुलाका पाटनहरूमा देशभरबाट मान्छे पुग्छन् । डोल्पामा पाइने यार्चाकुम्भु अरू जिल्लाको तुलनामा महँगोमा किनबेच हुन्छ । २०६४ सालतिर ४० रुपैयाँ प्रतिगोटा पाइने यार्चाकुम्भु गत वर्ष १ हजार ५ सय प्रतिगोटा बिक्री भएको थियो ।
डोल्पाका विद्यालयहरू यार्चाकुम्भु संकलनको समयमा बन्द हुन्छन् । लगभग १ महिना शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीसँगै यार्चाकुम्भु संकलन गर्न जाने हुनाले अधिकांश विद्यालयको शौक्षिक गुणस्तर कमजोर छ । यो समयमा खेतीपाती र अन्य काम पनि ठप्प हुन्छन् । पठनपाठन र अन्य काम छोडेर यार्चाकुम्भु संकलनका लागि समय छुट्याउनुले पनि हिमाली जीविकोपार्जनमा यसको महत्त्व देखाउँछ । हिमाली बासिन्दाले यसरी २ देखि ३ महिना खटेर गरेको कमाइले वर्षभरि खर्च पुर्‍याउँछन् । घरखर्च, विद्यालय शुल्क, औषधि उपचारदेखि ऋण तिर्नसम्म यार्चाकुम्भुको भर पर्नुपर्छ । व्यवसाय बढाउन पनि यसैले मद्दत गर्छ । त्यसैले ज्यान जोखिममा पारेर स्थानीय बासिन्दा यार्चाकुम्भु संकलनमा हिँड्ने गर्छन् ।
यार्चाकुम्भुका कारण डोल्पामा प्राय: खेतीपाती गर्न छाडिसकियो । यार्चाकुम्भुको तुलनामा खेतीपातीको आम्दानी निकै कम हुन्छ । दु:ख भने खेतीपातीमा बढी छ । यार्चाकुम्भुको कमाइकै डोल्पा सदरमुकाम वरिपरि वा अन्न फल्ने खेतमा अहिले घरहरू ठडिन थालेका छन् ।
यस्तोमा स्थानीय तहले कोरोना महामारीको यो बेला यार्चाकुम्भु संकलन गर्न बन्देज लगाए धेरै घरको चुलोमा आगो बाल्दैन । त्यसैले हिमाली जनतालाई यार्चाकुम्भु संकलन गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
४३ दिनदेखि देश ठप्प छ । कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढेर ८२ पुगिसक्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा मानसिक र आर्थिक रूपमा हामी निकै प्रभावित भैसकेका छौं । कोरोना भाइरस फैलिन नदिन एकआपसमा १ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिँदै आएको छ । सिंगो विश्व सामाजिक दूरी बढाएर कोरोना कहर कम गर्न लागिपरेको बेला हिमाली जनताले यार्चाकुम्भु संकलन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने दुविधा बढेको छ । यार्चाकुम्भु टिप्न अनुमति दिनु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा छलफल जरुरी छ । यार्चाकुम्भु संकलन गर्न जाँदा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम बढी हुन्छ भन्ने जानकारी सबैमा छ । यदि अहिले यार्चाकुम्भु संकलनका लागि अनुमति दिने हो भने कोरोना भाइरसले हिमाली जिल्लामा पनि भयावह रूप लिने सम्भावना छ ।
डोल्पामा यार्चाकुम्भु संकलनका लागि रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र राजधानीबाट समेत मान्छेहरू आउने गर्छन् । ३ महिनाको संकलन अवधिमा लगभग १ लाख मानिसको भीड हिमाली पाटनमा हुन सक्छ । अहिले यार्चाकुम्भु संकलन गर्न दिने हो भने लकडाउनको बाबजुद छिमेकी जिल्लाहरूबाट संकलनकर्ता आउने पक्का छ । राज्यले यार्चाकुम्भु संकलनका लागि अनुमति नदिए पनि लुकेर वा छलेर संकलन गरिन्छ नै । गत वर्ष संकलन समयभन्दा अघि नै यार्चाकुम्भु पाइने पाटनहरूमा मानिसको भीड लागिसकेको थियो । यो वर्ष पनि यस्तै भीड लाग्ने पक्का छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणको त्रास रोक्न स्थानीय सरकारको रोहवरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर यार्चाकुम्भु संकलन रोक्न सकिन्छ । यदि संकलन रोक्न सकिएन भने यार्चाकुम्भु पाइने पाटनहरूमा एक व्यक्ति मात्रै कोरोना संक्रमण भए एकैपटक धेरै संकलनकर्तामा फैलन्छ । यार्चाकुम्भु पाइने विकट हिमाली जिल्लाहरूमा सुरक्षाकर्मीको अभाव छ ।
यार्चाकुम्भु संकलन रोकियो भने पनि यार्चाकुम्भु पाउने पाटन वरपर बस्नेहरूले सजिलै संकलन गर्नेछन् । यस्तोमा पाटन टाढाका निमुखा जनता बन्द गर्ने निर्णयको मारमा पर्नेछन् र वर्षभर अभावमा बाँच्न बाध्य हुनेछन् । भोकको कहर कम गर्न सरकारले छिटो ध्यान दिन जरुरी छ । बेलैमा तीनै तहका सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।
संकलन गर्ने नदिने निर्णय गर्दा तत्कालका लागि आफ्नो रोजीरोटी खोसिएजस्तो लागे पनि यदि सरकारी निकायहरूले सकारात्मक सोच्न र योजना बनाउने हो भने यार्चाकुम्भुमा निर्भर हिमाली जीविकाको वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्छ । हिमाली जिल्लाहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनमा धनी छन् । यस्ता जिल्लाहरूमा यार्चाकुम्भु मात्रैले रोजीरोटी धान्दैन । जीविकोपार्जनको अन्य विकल्पको पनि खोजी गरिनुपर्छ । अन्य दिगो जीविकापार्जनका स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा छन् । यो वर्ष यार्चाकुम्भु संकलन रोकेदेखि जनता र स्थानीय निकाय अन्य स्रोत खोज्न बाध्य हुन्छन् । सबै सम्बन्धित निकायले योजना बनाउने हो भने पर्यटन, फलफूल खेती र कृषि दिगो र सुहाउँदो आम्दानीका स्रोतहरू हुन सक्छन् ।
यार्चाकुम्भु संकलनको सिजनअगावै राज्यले यो विषयमा कठोर निर्णयका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसका लागि, पहिले स्थानीय सरकारको सहयोग लिने र आवश्यक सुरक्षाकर्मी तयार पारी यार्चाकुम्भु संकलनलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ । अनि यार्चाकुम्भु निर्यातका लागि दिइने छुट पुर्जी यो वर्ष दिनु हुन्न । त्यस्तै यार्चाकुम्भु संकलनलाई अवैध घोषणा गरेर कसैले संकालन गरेर बिक्री वितरण गरेको पाए वन ऐनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यार्चाकुम्भुको विश्व बजार खस्किँदो छ र हङकङ, चीन, सिंगापुरका व्यापारीले किन्न नसक्ने स्थिति छ भन्ने सन्देश हिमाली गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ ।
यदि बढी माग हुने विश्व बजार अहिले बन्द छ भन्ने जानकारी संकलनकर्तासम्म पुर्‍याउन सकियो भने ज्यान जोखिममा पारेर यार्चाकुम्भु टिप्न कोही पनि जाँदैनन् । जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन र यार्चाकुम्भु संकलनमा रोक लगाउन सकियो भने गिर्दो उच्च हिमाली पर्यावरणले पनि आफ्नो प्राकृतिक रूपमा फर्किने मौका पाउनेछ । बर्सेनि लाखौं मानिसको चपेटामा पर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रका पाटनहरूमा फेरि पनि दुर्लभ हिउँचितुवा, नाउर, घोरलहरू चरिचरन गर्नेछन् । त्यहाँका खोलानाला यार्चाकुम्भु टिप्न गएका लाखौं मान्छेले फालेका प्लास्टिक र फोहोरबाट मुक्त हुनेछन् । यसरी तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदाय, व्यापारीसँगको सामूहिक छलफल र सहयोगबाट संकलनकर्तालाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिई यो वर्ष यार्चाकुम्भु संकलनको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने फैलँदो कोरोना संक्रमणबाट जनता बच्नेछन् । र, क्षय हुँदै गएको उच्च हिमाली पर्यावरणले पनि फेरि आफ्नै रूपमा फर्कने अवसर पाउनेछ ।
यो लेख कान्तिपुर , २०७७ साल वैशाख २४ गते प्रकाशित भएको हो ।
काठमाडौंले नदेखेको डोल्पाको पीडा
Rural coping and adaptation strategies for climate change by Himalayan communities in Nepal
यार्चाकुम्भुले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव!
Himalayan Conservation & Research Institute isadevelopment and conservation research institute, working for sustainable livelihoods of Himalayan communities as well as initiating scientific research on Himalayan biodiversity and the broader environment.
You have the opportunity to impact the lives of Himalayan girl to pursue the dream.
Himalayan Conservation & Research Institute ©2022 | All right reserved
Join Our Mission, Volunteer, Donate, Advocate.
Subscribe now to get more info.
Thank you for joining us on email! We can't wait to see what we can accomplish with you by our side.